Ywar Thar Lay (YTU): 2009
လမ်းတိုင်းမှာ လမ်းဆုံလမ်းခွတွေ လမ်းခွဲတွေ ရှိနေတတ်ကြတယ်။ လမ်းဆုံကနေ မိမိလိုရာကို သွားလိုတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် အကြောင်းတစ်စုံတစ်ရာ ရှိတဲ့အခါ ကျနော်တို့ လမ်းခွဲလေ့ရှိကြရတယ်။ မခွဲချင်ပေမယ့် ခွဲရတဲ့အခိုက်တွေ အများကြီးကြုံရမှာပါပဲ။ အခု ကျနော်လမ်းဆုံတစ်ခုမှာ ရပ်နေတာ ကြာခဲ့ပြီ……………..
လမ်းဆုံကနေ လမ်းခွဲရမယ့် အရေးကို မျှော်နေမိတာလည်း ကြာပါပြီ။ ခွဲရမယ်ဆိုတာလည်း သိပါတယ်။ အချိန်တန်ရင် အိမ်ပြန်ကြရတယ်မဟုတ်လား။ လမ်းဆုံကို မရောက်ခင် လမ်းခုလတ်ကနေ ထွက်ပြေးဖို့လည်း ကြိုးစားဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် မအောင်မြင်ခဲ့ပါဘူး။
နာကျင်မယ်ဆိုတာကို သိပါတယ်။ အမြဲတမ်းလည်း နာကျင်ရတယ်။ ဒါကြောင့် လမ်းဆုံကို မရောက်ပါစေနဲ့လို့ တိတ်တိတ်လေးကြိတ် ဆုတောင်းနေမိတယ်။ တောင်းတိုင်း ပြည့်တတ်တာမျိုးမှ မဟုတ်ပဲ။ လမ်းဆုံကို မှုန်ပြပြမြင်နေရပြီ။
မမြင်ချင်ယောင်ဆောင်ဖို့ အတင်း မျက်လုံးကိုလွှဲတယ်။ မရဘူး။ နားကိုပိတ်တယ် ကြားနေရတယ်။ ထိသိစိတ်တွေအားလုံးကို ခဏလောက် လွှင့်ပစ်လိုက်ချင်တယ်။ တဒင်္ဂခဏလောက် နားထိုင်းလိုက်ချင်တယ်ဆိုတာမျိုးပါ။ တကယ့်ကို အိုးထိန်းစက်လို သွက်သွက်ကိုလည်ပြီး ကျနော် သူရူးတစ်ယောက်လို ဖြစ်သွားတယ်။
ဒီလမ်းကို ဖြတ်ရင်လမ်းဆုံကိုတော့ တွေ့ရမှာပဲဆိုတာ သိလျက်နဲ့ မိုက်မိုက်မဲမဲ ဖြတ်မိတာ ကျနော့အမှားလား။ ကျနော် ကိုယ်တိုင်ဒီလမ်းကိုပဲ ရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ ဘယ်သူ ဘာပြောပြောပါလေ။ လမ်းထိပ်မှာ ရပ်ပြီး မြေပုံကိုဖြန့်ကြည့်တုန်းက ကိုယ့်ကိုကိုယ် မေးမိသေးတယ်။ မင်းလမ်းခွဲချိန်ကို ကျော်ဖြတ်နိုင်ပါ့မလား……….
ဟင့်အင်း ငါလမ်းဆုံကို ရောက်မှာ မဟုတ်လောက်ဘူးလို့ ကိုယ့်ကိုကိုယ့် ခံငြင်းမိတယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိပ်ယုံကြည်စိတ်ချလွန်းတယ်။ တကယ်က သိပ်နုံအလွန်းတယ်ဆိုတာကို အမေ့မေ့ အလျော့လျော့။ အခုတော့…………
ငိုမနေနဲ့။ ရှိုက်မနေနဲ့။ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆုံးမတယ်။ နာကျင်လည်း ဖြစ်မြဲပဲမို့ နာကျင်လက်စ နာကျင်လိုက်ပါတော့။ ကျင်သထက် ကျင်နေရင်းက ကျဉ်ပြီး နောက်တော့ထုံသွားမှာလို့ အားတင်းတယ်။ ပြီးတော့ လက်မကို လက်သီးထဲ ကျစ်ကျစ်ဆုပ် မေးကြောတွေထောင်နေအောင် အံကြိတ်ပြီး စကားတစ်ခွန်းပြောတယ်
Posted by Anonymous at 12:43 AM 26 comments Links to this post
လူတွေက ပြောကြတယ် ဒီပန်းပွင့် အချိန်တန်ရင်တော့ ပွင့်တတ်သတဲ့။ ပြီးတော့ သိပ်လှတယ်တဲ့။ လူတိုင်းအတွက် ပန်းတစ်ပွင့်ဆီ သီးခြားစီရှိကြတယ်တဲ့လေ။ စိတ်လှုပ်ရှားစွာနဲ့ စောင့်ကြည့်ခဲ့မိတယ်။ ပန်းရယ် မြန်မြန်ပွင့်ပါတော့…………မြင်ချင်လှပါပြီ
ရက်ကိုလစား လကိုနှစ်စားပေမယ့် ပန်းပွင့်ကိုမှ မမြင်ရ။ အများတကာတွေ ပန်းပွင့်ကိုယ်စီနဲ့ သင်းရနံ့တွေဝေလို့။ ပွင့်လိမ့်နိုးနဲ့ မျှော်ကိုးစောင့်စားရတဲ့ ရက်တွေ အသင်္ချေ။ ပန်းပွင့်ဖို့ နေနေသာသာ အဖူးအရိပ်အယောင်တောင်မှ မမြင်ရ။
သစ်ပင်သစ်ကိုင်းကြား ရွက်ကြိုရွက်ကြားမှာ တစ်ယောက်တည်းငေးလို့။ တွေ့လိမ့်နိုးရယ် ရှာဖွေမိတတ်တယ်။ သူများတွေပြောသလို အဆင်းရယ်ကြွေစေလောက်သလား ရနံ့တွေဝေနေလောက်မလား မေးခွန်းပေါင်းများစွာနဲ့ အတွေးတွေ ရေတွက်လို့ မှေးစက်မပျော်တဲ့ ညတွေများလှပေါ့။
အချိန်တန်ပြီဆိုတဲ့ ကာလကို လွန်မြောက်ပြီဆိုတဲ့နောက် ပန်းပွင့်တယ်ဆိုတဲ့စကားနားဝမှာ ခါးလာမိတယ်။ ဟိုက ဒီက ကြားလာမိရင် သိမ်ငယ်မိသလိုလိုပါပဲ။ ဒီပန်းနှယ် ပွင့်နိုင်ခဲပါဘိကော။
လေလည်းမသာ အရွက်တွေလည်း စိမ်းလန်းဝေဆာနေတဲ့ တစ်ရက်မှာ ပန်းပွင့် အဖူးလေးကို ဖျတ်ခနဲ အမှတ်မထင်တွေ့လိုက်ရတယ်။ ပိုင်ပိုင်မတွက်နိုင်ခင် လှမ်းပြီး မြင်လိုက်ကတည်း အရူးအမူးဖြစ်နေမိပြီ။ ပွင့်ပါစေလို့ အခါတစ်သိန်းဆုတောင်းနေပေမယ့် အရိပ်အယောင်တောင် မမြင်ရခဲ့ဖူးလေ။ ဘွားခနဲ ပေါ်လာတဲ့ မယ်မင်းကြီးသားကို အရူးတစ်ယောက်လို ငေးနေမိတယ်။
ပွင့်တော့ပွင့်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟိုးအရွက်တွေကြားမှာ။ ပင်ယံဟိုစိမ်းရွက်ကြား မွှေးရနံ့ဆင် ဆိုတာ။ ငွါးငွါးစွင့်စွင့် ပွင့်ပါတော့လား။ လူတကာ မြင်သာထင်သာ ပွင့်ပါမှ ဒီပန်းအတွက် ဂုဏ်ယူရမယ် မဟုတ်လား။ အခုတော့ အရွက်တွေဖုံးနေတဲ့ နေရာမှာမှ ပွင့်တော့တယ်။
ပန်းရယ် စောင့်ခဲ့ရ ရက်တွေအတွက် စောင့်ရကျိုးလေးနပ်အောင် ပွင့်တော့ပွင့်ရှာပါရဲ့။ လူမြင်မခံရဲလို့လား ပန်းရယ်။ ၀ံ့ဝံ့စားစား ပွင့်ပါတော့လားကွယ်။ ပန်းပွင့်ပြီကွ လို့ ကြွားချင် မော်ချင်မိတယ်။ ဒါပေမယ့် အရွက်တွေကြားမှာပဲ နေပါရစေဆိုတဲ့နောက်…………
ဒီပန်းကိုလည်း မြတ်နိုးမိပါတယ် တကယ်။ ကပ်သီးရယ် ကပ်သပ် ပွင့်ရှာလေတယ်ရယ်လို့ အသနားပိုမိတယ်။ မမြင်ဝံ့အောင် ပွင့်ရှာတယ်လို့လည်း ကရုဏာသက်မိတယ်။ လှပါတယ် လို့တဖွဖွပြောပေမယ့် မြင်သူမရှိတဲ့နောက် အပိုပါပဲလေ။
ပန်းကလေးအတွက် တခါတလေ တီးတိုးရေရွတ်မိပြန်တယ်
Posted by Anonymous at 1:15 AM 22 comments Links to this post
ကော်ဖီခွက် ပုရွက်ဆိတ်၊ ရဲတိုက် နှင့် ဆေးမင်ရည် စုပ်ထိုး………………
အသက်ကလေးရလာတော့ ဟိုက ဒီက မေးကြပါတယ်။ ဘယ်တော့စားရမလဲ။ တီးတီးတိုးတိုး သဖန်းပိုးနဲ့ သီတင်းကျွတ်တော့မည် သီတင်းကျွတ်တော့မည်တဲ့။ လွယ်မယောင်နဲ့ခက် တိမ်မယောင်နဲ့နက် အမေ့သား ဘယ်တော့ ရေတိမ်နစ်မယ်မသိသေး….
ရုံးက အစ်ကိုကြီးတစ်ယောက်က ပြောတဲ့ ဥပမာက ကော်ဖီခွက်နဲ့ ပုရွက်ဆိတ်တွေ…………….
လူပျိုလေးတွေက ခွက်နှုတ်ခမ်းက ပုရွက်ဆိတ်တွေနဲ့ တူကြတယ်တဲ့ ခွက်ထဲက ကော်ဖီကို ပူမှန်းမသိ အတင်းခွက်ထဲခုန်ဆင်းမယ်ချည်းဆိုပဲ။
Supplier အစ်ကိုတစ်ယောက်ပြောတာက အိမ်ထောင်ပြုတာကို ရဲတိုက်တစ်ခုနဲ့ ဥပမာပြုတယ်။ အိမ်ထောင်မပြုရသေးတဲ့ သူတွေက ရဲတိုက်ထဲကို ၀င်ချင်ကြသတဲ့။ ၀င်ချင်ဆို ရဲတိုက်ကြီးကလည်း တယ်ခမ်းနား ကြီးကျယ်တာကိုး။ အိမ်ထောင်ပြုပြီးသူတွေကတော့ ရဲတိုက်ထဲကလူတွေတဲ့ ရဲတိုက် အပြင်ဘက်ကို ဖြစ်နိုင်ရင်ပြေးထွက်ချင်ကြတယ်တဲ့လေ။
အိမ်ထောင်ပြုခြင်းနဲ့ စပ်လျဉ်းပြီး အိမ်ထောင်တစ်ချို့အကြောင်းကို တွေးမိသွားစေခဲ့တယ်။
မေက မောင့်မျက်နှာတစ်ရွာထင်ပြီး လိုက်လာခဲ့ပြီ။ မောင်တို့ဆီမှာက မောင်နှမ ဆယ့်သုံးယောက်။ မေက ရွှေဘုံစံမင်းသမီး ရွှေလင်ပန်းနဲ့အချင်းဆေး မင်းမွေးသလို မွေးထားတဲ့ သမီး။ မောင်တို့က ဦးလေးတွင်ခုံမှာ မိသားစု တွေ ၀ိုင်းလုပ်ဝိုင်းစားပေါ့။ ဆင်းတယ်ရဲတယ် မေဘယ်မမှုပေမယ့် သောက်ဟယ်စားဟယ် မောင်တို့ အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ မေ့တွက်တာ နေရာခက်လှတယ်။ ကျန်တဲ့အချိန် စင်းလုံးချော ကောင်းလေတဲ့ မောင့်အသွေး၊ သေရည်တွေ ၀င်ရင်တော့ သွေးဆိုးတွေဖြစ်နေခဲ့သည်တဲ့။ ဒီသေရည်သောက်သည့်အချိန်တိုင်း စကားတွေများ ရန်တွေဖြစ် နောက်ဆုံး လက်တွေပါသည်အထိ။ အကြိမ်ကြိမ်ပြိုကွဲမယ်လို့ ကြံစည်မိတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခုပေါ့။ ဒါပေမယ့် သားလေး မွေးပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ မောင်ပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်။ အစစအရာ ပြောင်းလဲမှုတွေနောက်မှာ မောင့်ရဲ့ အရိပ်ဟာ မေ့အတွက် အေးရိပ်သာဖြစ်စေခဲ့တယ်။ နွေးထွေးတဲ့ မောင့်လက်တစ်စုံဟာမေ့အတွက် ဘယ်အရာမဆို ရင်ဆိုင်ရဲတဲ့ ခွန်အားတစ်ရပ်ပါ။ အခုအခြေအနေကို မြင်ကြတဲ့ သူတိုင်းက ငြိမ်းချမ်းလေခြင်း ကံကောင်းလေခြင်းဆိုပြီး မေ့ကို အားကျချီးမွမ်းကြတယ်။ တကယ်ဖြတ်ခဲ့ဖူးတဲ့ မေ့ဘ၀ ခရောင်းတောကာလကို သူတို့ မသိခဲ့ကြပါဘူး။ သူတို့မြင်ရတဲ့ ကာလက ရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့ မေ့တိုင်းပြည်ဖြစ်နေခဲ့ပြီလေ။
ကျွန်ကုလား မယားတောသူ၊ ဒီစကားပုံကို ဘာဖြစ်လို့ ယုံမိပါလိမ့်။ မရွှေအေးတို့က ဟိုးတောဆိုမှ တောထဲက။ ကားလမ်းခရီးဆိုတာတောင် ဖြစ်ဖြစ်ြမည်အောင် သွားဖို့ ခက်ခဲဘိခြင်း။ လေယာဉ်ခရီးကျတော့လည်း ငွေရေးကြေးရေးက မတတ်နိုင်ရင် လေယာဉ်ဆိပ်သွားဖို့တောင် အနိုင်နိုင်။ မရွှေအေးတို့ အိမ်ထောင်ကျတော့ ယောင်နောက် ဆံထုံးပါ ရန်ကုန်မြေကို ခြေချပြီပေါ့။ သူပြောနေကျ စကားက ကိုယ်တွေတုန်းက တောမှာနေလို့ နိမ့်ကျခဲ့သတဲ့။ သူ့သားသမီးတွေ မနိမ့်ကျအောင် ရန်ကုန်မြေက တလက္မမှ မရွှေ့ချင်ဘူးဆိုပဲ။ အိမ်လခလား ယောက္ခမပေးလိမ့်မယ်။ ဆန်နဲ့ဆီိ ယောက္ခမပေးလိမ့်မယ်။ မရွှေအေးဘာလုပ်နေလဲ ဟုတ်လား။ အားတယ်ကို မရှိပါဘူး အိမ်ရှေ့က ပူတော့ အိမ်နောက် ပြောင်းအိပ် အိမ်နောက်က ပူတော့ အိမ်ရှေ့ပြောင်းအိပ် နေ၀င်မိုးချုပ် အလုပ်တွေသိပ်ရှုပ်ပေါ့။ မရွှေအေးတို့ကျေးဇူးရှင် ယောက္ခမကို ဘယ်လိုထားသလဲ သိလား။ သူရန်ကုန်တက်လာရင် မြန်မြန်ပြန်အောင် လုပ်တာပေါ့။ နားဆူတယ်လေ။ လိုအပ်တဲ့ ငွေကြေးအကူပဲယူမယ် ယောက္ခမ အပူမယူလို။ သူတို့သားအမိတွေကြား ရန်တိုက်ပေးလိုက်တယ်။ အိမ်က နွားကလည်း မရွှေအေးပြောသမျှ ယုံတယ်လေ။ ခပ်ပါးပါးပါပဲ တစ်ချက်နှစ်ချက် ပုတ်လိုက်ရင် ဘွားတော်ကြီး အိမ်ပြန်ခရီးပေါ့။
တံခါးနောက်ကွယ်က အဖြစ်တွေကို ဘယ်သူမှ သိကြမယ်မဟုတ်ဖူး။ ကိုကိုက သိပ်ချစ်တယ်တဲ့။ ယုံပါတယ် ကျွန်မယုံပါတယ် ကိုကို ကျွန်မကို သိပ်ချစ်တယ်ဆိုတာ အခုတော့ ကျွန်မသိပြီလို့ ပြောရမတတ်အောင်ကို ယုံပါတယ်။ ယောင်္ကျားလေးတွေနဲ့ မပတ်သတ်ရဖူး။ သူငယ်ချင်း ယောင်္ကျားလေးတွေနဲ့ ချက်တင်မှာ စကားပြောတာ ဖုံးပြောတာတောင် လက်မခံနိုင်ဖူးတဲ့လေ။ အပြင်ထွက်ပြီး သူငယ်ချင်းတွေနဲ့တွေ့ရင်လည်း မိန်းကလေးတွေချည်းဖြစ်ရမတဲ့။ ဖုန်းတဂွမ်ဂွမ်ဆက် ယောင်္ကျားလေးအသံတစ်ခုများကြားရင် အခုချက်ချင်း ပြန်ခဲ့ရမတဲ့။ ဘယ်လောက်မွန်းကြပ်လိုက်သလဲ ကျွန်မဘ၀က ဘယ်လောက် ကျဉ်းကျပ်သလဲ။ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်အသိုင်းအ၀ိုင်းမှာ ဒီလို ဘောင်တစ်ခုနဲ့ နေရမယ်ဆို လှောင်အိမ်ထဲက ငှက်တစ်ကောင်နဲ့ထပ်တူ ဖြစ်နေတော့မပေါ့။ အကယ်၍များ စကားတွေများကြပြီဆိုရင် လမ်းခုလတ်မှာ သန်းခေါင်သန်းလွဲဖြစ်လည်း ကျွန်မကို မငဲ့ကွက် ထားခဲ့ရက်ပြန်တယ်။ ဒီထက်ပိုပြီး မိန်းကလေးပီပီ အနိုင်ယူစိတ်နဲ့ ကိုကို့အသားကို လက်သည်းချွန်တစ်ချက်ဆွဲမိရင် ကျွန်မမျက်နှာ အညိုအမည်းထင်ပြန်တယ်။ ဒါ သိပ်ချစ်တာတဲ့လား ကိုကိုရယ်။ အကျဉ်းထောင် တစ်ခုလို ငရဲခန်းတစ်ခုလို ဖြစ်နေတဲ့ အိမ်ထောင်ဆိုတဲ့အရာကို ရှင်တို့များ အားကျနေမိသလား။ လွတ်လပ်စွာ ကိုယ်သွားချင်တဲ့နေရာကို သွားလာနေကြတဲ့ အိမ်ထောင်မရှိသေးတဲ့ ကျွန်မ သူငယ်ချင်းတွေကို မြင်ရင် အတောင်ဖြတ်ခံထားရတဲ့ ငှက်တစ်ကောင်လို ကျွန်မ လှောင်အိမ်ထဲက အတောင်တကြွကြွ ဖြစ်နေဆဲပါလေ…………
သံတူကြောင်းကွဲ မျိုးစုံသော အိမ်ထောင်ရေးတွေ အက္ခရာတစ်အုပ်စာ မက ရှိပါလိမ့်မည်။
အိမ်ထောင်ပြုဖို့ဆိုရင် ကျနော် ပထမဆုံးစဉ်းစားမိတဲ့ အချက်က နားလည်မှုဆိုတာပါပဲ။ အပြန်အလှန်နားလည်မှုရှိပြီး ကျနော့လက်ကို ထာဝရတွဲသွားမယ့်သူက ကျနော့အိမ်ထောင်ဖက်ဖြစ်မှာပါ။ တစ်ဖတ်သတ်ကြည့်ပြီး မိမိလိုအင်ဆန္ဒကို ရှေ့တန်းတင်ကြမယ်ဆိုရင် သာယာတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးတစ်ခု ဖြစ်လာမယ်လို့ ကျနော် မမြင်မိပါဘူး။
အခုအချိန်ထိမရင့်ကျက်နိုင်သေးတဲ့ ကျနော်လို လူတစ်ယောက် အိမ်ထောင်ရေးဆိုတဲ့ အမြင်ကို ဆွေးနွေးနိုင်ဖို့ သိပ်ခဲယဉ်းလွန်းပါတယ်။
ကျနော် အိမ်ထောင် ဘယ်တော့ပြုမလဲ…ဟုတ်ကဲ့ အိမ်ထောင်ပြုဖို့ အခွင့်အခါ ကြုံကြိုက်ရင် အိမ်ထောင်ပြုဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကျနော့အသက်လား ငယ်ပါသေးတယ်။ ဘာမှတောင် မဘာရသေးလို့ လူအများဆူလည်း ခဏပေါ့။ ခလေးပဲရှိသေးတာကိုး။ မယုံရင် အမေ့ကိုမေးကြည့်ကြပါ…………………
Posted by Anonymous at 6:55 PM 26 comments Links to this post
နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ခြေလှမ်းတွေတော့ လှမ်းမြဲလှမ်းနေတာပါပဲ။ ပုံမှန်ခြေလှမ်းတွေကြားမှာ နေသားကျနေခဲ့ပြီ။ ခြေလှမ်းသစ်လှမ်းဖို့ ဟမ်……………လိုအပ်တယ်လား……………………….
ဒီပုံမှန်ခြေလှမ်းတွေနဲ့ တစ်နှစ်ပြည့်တော့ အစ်ကိုတစ်ယောက်က မေးတယ် ဘာလုပ်မှာလဲတဲ့။ ဘာလုပ်ရမလဲ ကိုယ့်ကို ကိုယ်မေးဖို့ လိုအပ်နေခဲ့ပြီ။ ဘာလုပ်သင့်သလဲ ဘာလုပ်ရမလဲ အား…. ခေါင်းတွေပူလာပြီ။ အခု မကြီးဝါက နောင်ငါးနှစ်အတွက် မေးပြန်ပြီ။
ဒီနိုင်ငံမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့နောက် ဒီနိုင်ငံမှာ ဆက်နေသင့်သလား။
Permenant Resident (PR) လျှောက်သင့်သလား။
ဒါမှ မဟုတ် တတိယနိုင်ငံတစ်ခုကို ကူးရမလား (အမေရိကား၊ သြစတြေးလျား စသည်…)
ဥမကွဲ သိုက်မပျက်နေဖို့ ရွှေပြည်ကြီးကို ပြန်သင့်သလား။
PR ကကော လျှောက်တိုင်းရမှာတဲ့လား။ PR ရရင်ကော ဘာတွေထူးခြားလာမလဲ ငါးနှစ် နေထိုင်ခွင့် ပြီးတော့ အချိန်မရွေးအလုပ်ထွက်နိုင်ခွင့်လက်မှတ်တစ်ခု ကိုင်ဆောင်နိုင်တာထက် ဘာမှ ပိုလာမှ မဟုတ်တဲ့အပြင် CPF (Central Provident Fund) လစဉ် အဖြတ်ခံရမှာတော့ သိပ်သေချာပါတယ်။
အခုလတ်တလောမှာ PR တွေကို Citizen ဖြစ်အောင် တွန်းအားတွေ များလာသလိုတွေ့လာရတယ်။ ကျောင်းလခတွေ တိုးလာတာ အပြင် PR နဲ့ Citizen ခံစားမှု မညီမျှခြင်း စတဲ့အချက်တွေက Citizen ပြောင်းဖို့ အဓိက စဉ်းစားစေတဲ့အချက်တွေပါပဲ။ ပြည်ပခရီးတွေ အထွက်များတဲ့သူဆို ခြားနားချက်တွေကို ပိုသိမှာပါလေ။ သူ့အရပ်နဲ့ သူ့ဇာတ်ဆိုတော့လည်း ကိုယ့်ရွာက ကြက်ဖ သူတပါးရွာမှာ ကြက်မပေါ့။ နိုင်ငံသားစွန့်လွှတ်ဖို့ အခုအထိတော့ အစီအစဉ်မရှိသေးပါဘူး။ တို့ပြည်ကိုချစ်လွန်လွန်းလို့ အတင်းဖက်တွယ် ပြောရအောင် အပြင်ကိုရောက်နေတဲ့သူတစ်ယောက်အနေနဲ့ မတင့်တယ်ဖူးထင်ပါရဲ့။
နောက်ထပ်နိုင်ငံကူးဖို့ ဘယ်လိုကူးရမလဲ။ ဟိုဟိုဒီဒီ ခပ်လွယ်လွယ် သွားနိုင်လောက်အောင် ခိုင်ခန့်တဲ့ ပညာအရည်အချင်းကလည်း မပြည့်ဝလေတော့ စိတ်သွားတိုင်း ကိုယ်မပါနိုင်ပြီလေ။ ကျောင်းဆက်တက်ခြင်းနဲ့ ကူးဖို့။ ဟင့်အင်း မပြောပါနဲ့ ပညာရေးက ဆုံးခန်းတိုင်ပြီထင်တယ် တော်ပြီလေ သေစာရှင်စာ ဖတ်တတ်နေမှပဲ။
တကယ်သွားဆိုရင်တော့ သွားချင်မိတယ် အမေရိကား။ သူများ ကားလို့ ကားတာပါ ကိုယ်တိုင်က ရောက်ဖူးလို့ မှ မဟုတ်ပဲ။ လျားမယ်ဆိုလည်း လျားမယ်လေ သူများယောင်လို့ လိုက်ယောင် အမောင်တောင်မှန်းမြောက်မှန်းမသိဆိုတာ ကျနော်မှ အစစ်။ လျားသာ လျားချင်တာ အဖြစ်တော့ တယ်မရှိ။ အခုအချိန်အထိ ဘာကိုမှ မပြင်ဆင် မလေ့လာ။ ဒုံရင်းက ဒုံရင်းဆိုတော့…..ဘာဖြစ်သေးလဲ တစ်နေ့တစ်လံ ကား လျား ဘယ်ရွေ့မလဲပေါ့။ ရှေ့တိုးမယ့် ရွာသား နောက်ခြေလှမ်း ကိုးဆယ်ဆုတ်ပစ်လိုက်တယ်။ လှုပ်သာ လူးသာ ရှိအောင်ပါ ကျနော် ၀တာ လူမသိစေအောင်လည်း ပါတာပေါ့။ နောက်မှ ဦးတည်ချက်လွဲတော့လည်း GPRS မကောင်းတာကြောင့်လို့ ပဲ အပြစ်ဖို့တော့မယ်။
ပြန်မယ်ဆိုရင်ကော… ဒီအချက်ကတော့ တော်တော်လေး စဉ်းစားစရာတွေကို ပေးပါတယ်။ ဘာလုပ်မလဲ ဘယ်လိုနေမလဲဆိုတာက စတာကနေ အင်တာနက် သုံးလို့မရရင် နေနိုင်ပါ့မလား။ အခုလိုဒေါင်းလုပ် လုပ်လို့နှေးနေရင်တောင် စိတ်မရှည်တာ ဟိုမှာ စိတ်ရှည်ပါ့မလား။ ဒေါ့ကွန်းတွေတောင် ဖွင့်ရခက်တဲ့နေရာမှာ ဘလော့စပေါ့ဒေါ့ကွန်းကို ဘယ်လို ရေးမလဲ။ ဖယောင်းတိုင်တွေ မီးစက်သံတွေ ခြင်တွေနဲ့ တစ်သားတည်းမဖြစ်ခင် အိပ်ရေးဘယ်လောက်ပျက်ဦးမလဲ၊ အရင်လို ရေတင်ဖို့ မနက်လေးနာရီထနိုင်ပါဦးမလား၊ ၂၀၇ ၂၀၄ ဘတ်စ်ကား ကြပ်ခြင်းနဲ့ ၃၅ ၅၁ စပယ်ယာတွေရဲ့ အဆိုအငေါက် ကို ခံနိုင်ပါ့မလား အဆုံး အားလုံးကို တွေးတောနေမိတယ်။
ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် စီးပွားရေးတွေလုပ်ဖို့ စိတ်ကူးယဉ်ထားတာတွေတော့ ရှိပါတယ်။ အကယ်၍များဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပါ….
၁။ စာအုပ်ဆိုင် (အရောင်းဆိုင် ဖြစ်ဖြစ် အငှားဆိုင်ဖြစ်ဖြစ်ပါ ဖတ်ရင်းရောင်း ရောင်းရင်းဖတ်ဖို့ပါ)
၂။ အခွေအငှားဆိုင် (ကားကောင်းလေးတွေ စုချင်လို့ ဘာကားကောင်းလဲ မမေးပါနဲ့)
၃။ ဖက်ရှင်ဆိုင် (ကိုယ်လည်းဝတ် သူများတွေလည်း ၀တ်ပေါ့၊ ရိုးရာဖျင်ကြမ်း ပုဆိုး ဖက်ရှင်ပါ)
၄။ စားသောက်ဆိုင် ကောင်းကောင်း (ကုသိုလ်လည်း ရ ၀မ်းလည်း ၀ ဆိုတာမို့)
၅။အင်တာနက်ဆိုင် (ကိုယ်တိုင် ဆိုင်ဖွင့်ရင် ဆိုင်ပိတ်ချိန်ပူစရာမလိုတော့ဖူးဆိုတော့ တစ်ချက်ခုတ် လေးငါးချက်ပြတ် သတိ -မခင်ဦးမေ လက်မခံပါ)
လူကုန်ကူးဖို့ လုပ်ဖြစ်ချင်လည်း လုပ်ဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ တနေ့ကပဲ customer တစ်ယောက် marketing ပြန်ဆင်းသွားတယ် မြန်မာပြည်က လူတွေ ဒီကို သွင်းချင်လို့ဆိုပဲ။ စိတ်ဝင်စားရင် လက်တို့လိုက်ပါတဲ့။
ရည်ရွယ်တဲ့လမ်းဟာ ဘယ်လောက်ဝေးဝေးကွယ် ဒီခြေတစ်လှမ်းနဲ့ စတင်ဖို့သာလိုတယ် ပထမဆုံးဒီခြေလှမ်းဟာ အို နောက်ဆုံးတော့ ပန်းတိုင်ရောက် နိုင်မယ်…………သီချင်းသံ သဲ့သဲ့ကြားတယ်။ ဘယ်နားကပါလိမ့်…
အခုတော့ ဘယ်ခြေစလှမ်းရမလား ညာခြေစလှမ်းရမလား အဆုံးအဖြတ်အတွက် ခေါင်းပန်း လှန်ဖို့ နှစ်ထပ်စေ့ တစ်စေ့ ရှာနေတုန်း……………..
(စာဖတ်သူတွေပါ ၀ိုင်းဆွေးနွေးပေးမယ် အကြံဥာဏ်ပေးကြမယ်ဆိုရင်တော့ နောနော် ပါခင်ဗျာ)
Posted by Anonymous at 12:10 AM 25 comments Links to this post
စံကားပွင့် ၀င်္ကပါထဲက အထွက်
ကျနော် ငယ်ငယ်ကတည်းက တစ်အားစူးစမ်းတတ်ပါတယ်။ အဖြေတစ်ခုမရမချင်း မေးတတ်တယ်လို့ မေက ပြန်ပြောပြလေ့ရှိတယ်။ မေးခွန်းတွေများလို့ အမြဲတမ်းအငေါက်ခံ အဆူခံရစမြဲ။ သူငယ်ချင်းတွေ မိတ်ဆွေတွေကိုလည်း မေးခွန်းတွေ မေးလေ့ရှိတတ်တာမို့ အငြိုအငြင် အမြဲခံရတတ်ပါတယ်။ ကျနော့ကို အဆုံးထိ ဒုတ်ဒုတ်ထိသိအောင် မပြောချင်ကြရင် စကားတစ်ခွန်းမှ မဟပါနဲ့လို့ အရမ်းရင်းနှီးသူတွေကို တောင်းပန်ဖူးပါတယ်။ (တကယ်က သိပ်အ သိပ်တုံးတဲ့သူမို့ ရှင်းပြတဲ့သူတွေ မောသွားလည်း မောင်ပုံ က စောင်းမတီးတတ်စမြဲ)
စံကားပွင့် ၀င်္ကပါထဲကိုတော့ ကျနော် ကိုယ်တိုင် ၀င်ရောက်သွားခဲ့တာပါ။ တစ်ပွင့်ချင်း သီတဲ့ အဲ့ဒီ ပန်းသီကုံးထဲမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ကြာအောင်ကို
လက်တွေ့ရဲ့ အမှန်တရားကို တုန်လှုပ်ရတတ်တယ်…
“အသံသည် အသက် သိပ်မကြီးသေးသော ယောင်္ကျားငယ် တစ်ယောက်၏ အသံဖြစ်သည်။
ကျွန်မ အိပ်နေရာ စံကားဖြူပင်၏ နောက်မှလာသည်။ အသံက တိုးတိုး၊ မွမွညက်ညက်၊ နူးညံ့ သိမ်မွေ့သည်။ စိတ်ရှည်ရှည် ချော့တတ်မည့် အသံမျိုး ဖြစ်သည်။ ဘယ်သူပါလိမ့်….”
ထိုစံကားပွင့် အဖူးမှ ကျနော် စံကားပွင့်ကို အနီးကပ် ကြည့်ချင်မိသွားသည် အထိ။
“ရှင်က အခု ဘယ်မှာလဲ၊ ရှင့်နာမည်က ဘယ်သူလဲ၊ ဒီရွာသားလား “
“ အသံရှင် သည် ခပ်တိုးတိုးရယ်မောလိုက်သည်။ စကားသံ ခဏရပ်သွားပြီးနောက် သူ့ပုံပြင်ကိုသာ ဆက်ပြောနေ၏”
စံကားပွင့် အနီးကိုရောက်သွားသောအခါ ထိုစံကားပွင့်၏ ညှို့ငင်မှုအောက်မှာ ကျနော် သတိလက်လွတ်သွားပါတော့သည်။
“ဗြုန်းခနဲ ရှောင်ပုန်းချိန်မရလိုက်သော ပုံပြင်ဆရာသည် စံကားပင်၏ တစ်ဘက်မှာ ကျွန်မကို မျက်နှာချင်းဆိုင်လျက်သား ဖြစ်နေတော့မည် ဟူသည့် မျှော်လင့်ချက်နှင့် ဖြစ်သည်။ သို့သော် ကျွန်မ၏ မျက်စိအောက်တွင် လူတစ်ယောက်မျှ မရှိ။”
စံကားပွင့် တစ်ပွင့်နောက်ကို လိုက်ရင်း ကျနော် ရောက်သွားသည်က စံကားပွင့်တောအုပ်တစ်ခု အတွင်း ၀င်ရောက်နေမိပြန်ပါသည်။
၀င်္ကပါ အစကတော့ သိမ်မွေ့စွာ။
“ကိုယ်တို့ နှစ်ခါ တွေ့ဖူးတယ်လေ”
ကျွန်မ သူ့အသံကို မှတ်မိသွားသည်။
ကျွန်မ စိတ်လှုပ်ရှားစွာ ပြုံးမိသွား၏။
ထို့နောက်တွင်မတော့ ကျနော် ၀င်္ကပါထဲကို ကိုယ်တိုင် အတင်းတိုးဝင်မိသွားပါတော့သည်။
“ကျွန်မ၏ ဆံပင်များကို နွေးထွေးသောလေတစ်ချက် လှစ်ခန ထိတို့သွားသည်ကို ခံစားလိုက်၏။ ထို့နောက် ကျွန်မ၏ပါးပြင်ဆီမှာ တစ်ခုခုက ရွရွလေး၊ ပွတ်တိုက်သွားသလို၊ အပင်ပေါ်မှ ကြွေကျလာသော စံကားဖြူလေးတစ်ပွင့်က ကျွန်မကို ကျီစယ်သွားလေသလား၊ မွှေးလည်း မွှေးလျက် နွေးလည်းနွေးသော ထိတို့မှုကလေးပါ။”
“အဲဒီကောင်ဆိုတာ ဘယ်သူ့ကို ပြောတာလဲ ဆရာ”
ကျွန်မ သူ့ကို ငေးကြည့်နေမိတော့သည်။
အော်…..။ ကိုခွန်သာက မြဦးမေရဲ့ သား…….
ကျနော် စံကားပွင့် ၀င်္ကပါရဲ့ သုံးချိုးနှစ်ချိုးကို ရောက်သွားခဲ့မိပြီ။
“မမေဇော်….။ ခွန်သာမှ မရှိတော့တာပဲ”
မိုက်ခနဲ မူးဝေမှုကို ကျွန်မခံစားလိုက်ရသည်။
ကျွန်မတစ်ကိုယ်လုံး လေဟာပြင်တစ်ခုထဲသို့ လွင့်ကျသွားသလို လှပ်ခနဲ ဟာသွားသည်။
၀င်္ကပါဆိုတာ သိသွားပေမယ့် ကျနော် ၀င်္ကပါထဲကို ဆက်ဝင်ကြည့်မှ ဖြစ်တော့မယ်။ ကျနော့အကျင့် အတိုင်း အဖြေကို သိဖို့ ကျနော် ကြိုးစားရတော့မယ်။
“ကို ခွန် သာ က သေ သွားခဲ့ပြီလား” “
ကိုယ့်လက်ကို မင်းထိကြည့်လိုက်စမ်းပါ မေ၊ အဲ့ဒါ သေသွားပြီသားသူလား မေပဲကိုယ့်ကို ပြောပါ”
ကျွန်မကို ကမ်းပေးနေသော ညာလက်ကို ကျွန်မ လက်ဖျားဖြင့် အသာထိကြည့်လိုက်သည်။ အနည်းငယ်ကြမ်းရှသော၊ ခြောက်သွေ့သော နွေးထွေးသော လက်ဖြစ်သည်။
အမှန်တကယ်တော့ ကျနော်ထင်သလောက် ၀င်္ကပါက မလွယ်ကူ။ ဝင်္ကပါတို့၏ သဘောအတိုင်း စတင် ရှုပ်ထွေးစ ပြုလာခဲ့ပြီ။
“ဟောဒီ နေရာမှာ ကိုယ့် နှလုံးခုန်နေတယ်၊ မေ့လက်နဲ့ ထိကြည့်”
သူတင်းကြပ်စွာ ဆုပ်ကိုင်ထားသော ကျွန်မလက်ကို သူ့ဘယ်ဘက် ရင်ညွန့်ပေါ်သို့ တင်းတင်းဆွဲဖိပေးသည်။
ကျွန်မ လက်ဖ၀ါးအောက်မှာ တဆတ်ဆတ် လှုပ်ခုန်နေသော…..
ကျနော့ကို တစ်အားမလှည့်စားပါနဲ့ ၀င်္ကပါရယ်။ ခေါင်းတွေလည်း ပူလှပြီ။ ဒီည ဘယ်လိုလုပ် ကျနော် အိပ်ပျော်နိုင်ပါတော့မလဲ။
“ မသေ ရင် သူကျွန်တော်နဲ့ ဆက်သွယ်မှာပေါ့ မမေဇော်။ ကျွန်တော့်ကို မုန်းနေတယ်ဆိုရင်တောင် ဒေါ်တင်ဆီ မလာစရာ ဘာများရှိမှာလဲ။ ဒီအိမ်ထဲမှာ ပြန်မနေစရာရော ဘာများ ရှိမှာလဲ။ နောက်ပြီး ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် သူ့အလောင်းကို မြေမြုပ်ခဲ့တာလေ”
ဒီစာအုပ်ကို ညဘက်မှာ ဖတ်မိတာကိုက ကျနော့အမှားပါ။ တစ်ခုခုဆို သတ္တိကြောင်တာမျိုး မဟုတ်ပေမယ့် ကြက်သီးမွေးညှင်း ခဏခဏ ထ တတ်သူမို့ လက်ဖျံပေါ်က အမွှေးတွေ ခဏခဏထောင်လာမိတယ်။ နေနှင့်ဦးပေ့ါ ကိုခွန်သာ……
“ငါ တို့ဖော်လို့ ရတဲ့ အလောင်းမှာ လက်တစ်ဖက် ပျောက်နေတယ် မေဇော်”
ကျွန်မ ကြောင်ပြီး သူ့ကို ငေးနေမိ၏။
“လက်ကျိုးတာက ဘယ်လက်၊ လက်စွပ် ၀တ်ထားတာလဲ ဘယ်လက်။ အခုအလောင်းမှာက အဲဒီလက် ရှိမနေဘူး”
ဟာဗျာ အဖြေနားရောက်က မှ ဘဲဥအစ ရှာမရသလို ဖြစ်ပြန်ပါရောလား။
စံကားပွင့် ၀င်္ကပါ အဆုံး
ခုတင်ခေါင်းရင်းသို့ ရောက်သောအခါ ကျွန်မ ရင်တလှပ်လှပ် ခုန်လျက် မွေ့ရာပေါ်သို့ ငုံ့ကြည့်လိုက်သည်။ ကျွန်မ မျှော်လင့် မှန်းဆထားခဲ့ပြီးသော မြင်ကွင်းဖြစ်ပေမယ့် တကယ် မြင်လိုက်ရသည့်အခါ မိုက်ခနဲ ပြာဝေကာ ယိုင်သွားလေသည်။
ကျွန်မ၏ခေါင်းအုံးပေါ်တွင် ရှည်သွယ်သော ပွင့်ချပ်တွေ အထပ်ထပ်ဖြင့် ဖြူဆွ ကြွရွသော စံကားဖြူပန်းတစ်ပွင့်။
“မင်းခေါင်းအုံးပေါ်မှာ တစ်ယောက်ယောက်က ဒီပန်းလေးကို လာတင်ထားစေချင်သလား”
ပုစ္ဆာက အရမ်းကိုခက်ခဲလွန်းတယ်။ ဒီဝင်္ကပါထဲမှာ ဘယ်လို ပြန်ထွက်ရမလဲ။
“ပန်းကလေးတစ်ပွင့်က နင့်အတွက် အဲ့ဒီလောက်တောင် အရေးကြီးနေသလား မေဇော်။ ညသန်းခေါင်ကြီးမှာ လူလား တစ္ဆေ လား၊ လူကောင်းလား၊ လူဆိုးလား မသိတဲ့လူတစ်ယောက်ကို ရှိမှန်း မရှိမှန်း မသိဘဲ သွားရှာဝံ့ရလောက်အောင် အရေးကြီးသလား”
“ကြီးတယ်၊ တစ်ခါတစ်ခါကျတော့ ပန်းတစ်ပွင့်ဟာ ပန်းတစ်ပွင့်သာမကတော့ဘူး။ ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုလည်း ဟုတ်တယ်။ ဝေဒနာတစ်ခုလည်း ဟုတ်တယ် မင်းညို။ အဲဒီဝေဒနာကို ငါက အသိအမှတ်ပြုမှ ဖြစ်မှာပေါ့”
“ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီပန်းကို လာတင်ထားတဲ့သူက ငါဖြစ်နေရင်ကော”
သေချာနေပါပြီ ကျနော် ၀င်္ကပါရဲ့ အခက်အခဲ အနက်အနဲဆုံးအပိုင်းကို ရောက်နေခဲ့ပြီ။
“နင် ဘာဖြစ်လို့ အဲဒီစံကားပွင့်ကို မှ ခူးခဲ့တာလဲဟင်”
ဟင် လှတာတွေက အများကြီး၊ ဘာလို့ သူ့ကိုမှ….
နင်ကလဲ ဘယ်လိုပိုလှတာလဲ၊ ပွင့်ချပ် ဘယ်နှခုဆိုရင် လှတာလဲ၊ နည်းတာ လှသလား များတာလှသလား
နည်းတာလှတာပေါ့၊ များရင် ဘယ်လှပါ့မလဲ၊ ရှုပ်ကုန်မှာပေါ့
ကျွန်မ သူ့အဖြေကြောင့် စိတ်ထင့်သွားသည်။ ကျွန်မ၏ ခေါင်းအုံးပေါ်က စံကားဖြူသည် ဟောဟိုဥယျာဉ်ထဲက စံကားဖြူပင်တွေ အားလုံးတွင် ပွင့်ချပ်အများဆုံး ပန်းပွင့်လေ။
သေချာလွန်းမက သေချာလွန်းတဲ့ အဆုံးမှာတော့ ကျနော် အဲ့ဒီ စံကားပွင့် ၀င်္ကပါထဲမှာ ဘယ်လို မှ ပြန်ထွက်လို့ မရအောင် ပိတ်မိသွားခဲ့ပြီဆိုတာပါပဲ။ နောက်ထပ် တိုက်ဆိုင်တာက စာရေးဆရာက ဒီစံကားပွင့်ကို ပြီးဆုံးသွားတဲ့ ရက်။ ဘယ်လိုမှ မေ့စရာမရှိတော့။
စံကားပွင့် ဝင်္ကပါ အထွက်
၀င်္ကပါအထွက်က လမ်းနှစ်သွယ်ကိုဖြစ်စေခဲ့တယ်။ ဘယ်လမ်းကိုလိုက်ရမလဲ စာရေးဆရာကို မေးကြည့်တော့ စာဖတ်သူ ကြိုက်တဲ့လမ်းကို လိုက်လို့ရပါတယ်တဲ့။ စာရေးဆရာက ဘယ်လိုမျိုးဖန်ဆင်းခဲ့တာလဲခင်ဗျာဆိုတော့ ခွန်သာကို သက်ရှိတစ်ယောက်အနေနဲ့ ဖန်ဆင်းခဲ့တာဖြစ်ပြီး ခွန်သာက မေဇော်ကို ချစ်မြတ်နိုးစွာဖြင့် အနစ်နာခံ စွန့်လွှတ်တဲ့ချစ်ခြင်းကိုသာ ရွေးချယ်ခဲ့တဲ့ ချစ်သူတစ်ဦးပါ။ သူလို အညတရတစ်ယောက်နဲ့ နေရင် မေဇော်ဘ၀ မလှပ မှာစိုးတဲ့အတွက် သက်ရှိထင်ရှား ဘ၀ကို သူ ထွက်မလာခဲ့ပါဖူး။
ဒါကြောင့်လည်း သူနဲ့အတူ ကျနော် ဒီစံကားပွင့် ၀င်္ကပါထဲမှာ ပိတ်မိနေခဲ့တာ။
အခုတော့ ဒီဝင်္ကပါကနေ ကျနော် လွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါပြီ………………………………………….
ကျနော့မေးခွန်းတွေကို ဂရုတစိုက်ဖြေကြားပေးတဲ့ ဆရာမ ဂျူးကို ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာ.........
Credit to : ချစ်သူလား စံကားတစ်ပွင့် ပွင့်ခဲ့တယ် ဂျူး
Posted by Anonymous at 11:32 PM 17 comments Links to this post
Posted by Anonymous at 9:22 AM 24 comments Links to this post
မနကျက ဆရာတျောကွီးကို ဆှမျးကပျအပွီး ပုံမှနျအတိုငျး ရုံးတကျဖို့ သုတျသီးသုတျပြာ လုပျနဆေဲ ရှဈပါးသီလယူမညျ့သူမြား တရားနာရနျကွှပါဆိုတော့မှ သတိရတယျ ယနနေ့တျတျောလကှယျနေ့ ဥပုသျနေ့။
ဘဝမှာ မှတျရလှယျတဲ့ နရေ့ကျတှနေဲ့ အဖွဈအပကျြတှကေ သိပျတိုကျဆိုငျလှနျးနသေလား။
တနျဆောငျမုနျးလပွညျ့နေ့ မမှေ့ေးနပေ့ါ။ မမေ့ပြေ့ောကျပြောကျကို မဖွဈနိုငျလောကျအောငျ သိသာတဲ့နပေ့ေါ့။ လမငျးကွီးသာသလို မမေ့ကျြနှာငှလေဝနျးကလညျး ဝိုငျးစကျလို့။ အဲ့ဒီနေ့ ရောကျတိုငျး မပကျြမကှကျမကေို့ ကနျတော့ရငျး သူလိုခငျြတဲ့ မှေးနလေ့ကျဆောငျလေးတှေ ပေးနကွေ။ ကနြျောတို့ အိမျမှာက မိသားစုဝငျတဈယောကျမှေးနေ့ ရောကျတိုငျး စကျရုံနယျမွမှော အကောငျးဆုံးလို့ ဆိုရတဲ့ သရကျပငျဆိုငျမှာ မုနျ့စားခှငျ့ ရလရှေိ့တယျ။ တဈနှဈမှာ သုံးခေါကျပဲဆိုတော့ ဒီအခှငျ့အရေးက လကျမလှတျသငျ့ဖူးလေ။ ကနြျော အပွငျထှကျလာပွီးတဲ့နောကျပိုငျးတော့ သူတို့နှဈယောကျတညျး အခုလိုမှ လုပျဖွဈသေးရဲ့လား မသိတတျတော့။
သီတငျးကြှတျလပွညျ့နေ့ ကနြျောသုံးနှဈသားမှာပဲ မဖေ့ကျက အဖိုးဆုံးပါတယျ။ သီတငျးကြှတျကာလမို့ အမြိုးတှဆေုံနတေုနျးပေါ့။ အဲ့ဒီနေ့ နလေ့ညျက ကနြျောက အဖိုးရဲ့ အနောကျဖကျ ကုတငျမှာ အိပျနခေဲ့တာ။ ငိုသံတှကွေားလို့ အိပျခငျြမူးတူး ထကွညျ့တော့ မတေို့ ညီအဈမတှေ ငိုကွှေးနကွေတယျ။ ရှတေောငျကွီးပွိုပမေယျ့ ကနြျောက ငယျလတေော့ ဘာရယျကို မသိခဲ့။ ဆရာမတှေ အိမျမို့ ကြောငျးသားတှေ တရုနျးရုနျးနဲ့ ပြျောဖို့တောငျ ကောငျးသေးတော့။ အခုတော့ ခဏခဏပွောငျးလတေဲ့ သခငြ်ျိုငျးနောကျမှာ အဖိုးတောငျ ဘယျနားရောကျနပွေီလဲ။
ပွညျထောငျစုနေ့ မဖေ့ကျက အဖှားဆုံးတဲ့နပေ့ါ။ အဖှားဆုံးတော့ ကနြျောက ရနျကုနျမှာပါ။ အဖှားဆုံးပွီ ကွညျ့မွငျတိုငျက အဈမကို ချေါပွီး အမွနျလိုကျလာပါတဲ့။ ရနျကုနျ-မန်တလေး အမွနျရထားကို မနကျငါးနာရီ လကျမှတျတနျးစီပွီး ဝယျရတယျ။ ပထမဆုံးတဈယောကျတညျးသှားရတဲ့ ခရီးမို့ အနညျးငယျတော့ စိုးရိမျမိတယျ။ ဆယျတနျးဖွပွေီးကတညျး မုံရှာကို ပထမဆုံးပွနျရောကျတဲ့ခရီးပေါ့။ ကားကှငျးကို အပွငျထုတျထားပွီမို့ အရငျလို အိမျနားအထိ မရောကျတော့။ မွို့ထဲကို သှားတဲ့ကားကို စီးရငျး စြေးဟောငျးနားရောကျတော့ ဖနေဲ့ ဦးလေးကို ဆိုငျကယျနဲ့တှလေို့ကျတယျ။ ဒါနဲ့ကမနျးကတနျးပွေးဆငျးပွီး အိမျကို ပို့ခိုငျးရတယျ။ အိမျက သူတဈစိမျးတဈယောကျကို ကွိုသလို ခံစားရတယျ။ အဖှားဆုံးတော့လညျး မငိုမိပွနျဖူး။
အခြိနျကာလတှပွေောငျးပမေယျ့ အဟောငျးတှကေို မမနေို့ငျသေး။ တဈနှဈပွီးတဈနှဈ ထိုနရေ့ကျ အသဈမြားကလညျး ဖွတျကြျောဆဲ။ ထို့အတူ နတျတျောလကှယျနသေ့ညျလညျး ယခု တဈဖနျ ဖွတျကြျော ပွနျလပွေီ။
Posted by Anonymous at 9:21 AM 23 comments Links to this post
ဒီနှဈထဲမှာ ခရီးထှကျဖို့ အကွိမျကွိမျကွိုးစားတယျ။ ပထမ ဖူးခကျတဲ့။ စြေးခတြဲ့ အခြိနျလေး ကွိုတငျလကျမှတျတှေ အပွေးအလှားဝယျဖို့ ရတဲ့ အခြိနျက ခဏဆိုမှ ခဏလေး။ အခုမွငျ အခုပြောကျခတျေမို့ မငျးလိုကျမလား ငါလိုကျမလား မေးနတေုနျးမှာ လကျမှတျက မကနျြတော့။ ဖူးခကျကို စီစဉျသူကိုယျတိုငျက စိတျနာနတောမို့ ဘယျလိုမှ မအောငျမွငျတဲ့နောကျ ဘာလီဆိုပွီး လကျတို့မိပွနျရော။ ဘတျဂတျြက ဘယျလောကျလဲ တောငျစဉျးစား မွောကျစဉျးစားနတေုနျးမှာပဲ ဘာလီခရီးစဉျလညျး ပကျြပွနျပါရောလား။ နောကျဆုံးတော့ အပနျးဖွေ ခရီးစဉျ လနျကာဝီဆိုတာကိုရှေးပွီး ဇကာတငျခွောကျယောကျကို မနကျမှာပွော ညနမှော အတညျပွု နောကျနေ့ မနကျမှာ ကွိုတငျစာရငျးသှငျးဖွဈခဲ့တယျ။ မှေးနေ့ ပတျစပို့နံပါတျ ကုနျဆုံးမယျ့ရကျ လိုအပျသညျ့အခကျြအလကျတှကေို ပေးပို့ပွီး လယောဉျလကျမှတျကို အမွနျဝယျခဲ့လိုကျတယျ…………
လယောဉျလကျမှတျပွီးပွနျတော့ ဟိုတယျ။ စီစဉျသူက စိတျကူးယဉျဆနျစှာ ရတှေထေဲက ဟိုတယျလေးတှေ လိုခငျြသေးတယျ။ လိုကျမယျ့သူတှကေ ညအိပျရုံပဲမို့ နဖွေဈတယျဆို အိုကတေဲ့။ ဒါနဲ့ နောကျဆုံးတော့ အလယျအလတျကိုပဲကွားခပြွီး အဆငျပွနေိုငျမယျ့ဟိုတယျကိုပဲ ဘှတျကငျတငျခဲ့လိုကျတယျ။ လဆေိပျနဲ့အတျောလေးနီးပါတယျ ဒါပမေယျ့ ပငျလယျကမျးခွကေ အစဈမဟုတျခဲ့ဘူး။ ပွီးတော့ စားသောကျဆိုငျတနျး လူစညျကားတဲ့အရပျနဲ့ ဝေးလံနခေဲ့တယျဆိုတာ ရောကျတော့မှ သိခဲ့ရတာ။
ထုံးစံအတိုငျး ခရီးတဈခုမှာ အခကျအခဲပေါငျးမြားစှာနဲ့။ ခွောကျယောကျမှာ တဈယောကျသောသူက မရောကျသေးခဲ့။ ဖုံးတှဆေကျတော့ လာနတေယျလမျးမှာတဲ့။ ရောကျပွနျတော့လညျး သူရဲ့ ကိုယျရေးကိုယျတာကိစ်စတှနေဲ့ အထဲကို မဝငျနိုငျခဲ့ပွနျသေး။ စ စခငျြးဖွဈတာကတော့ အတူခရီးသှားမယျ့သူတဈယောကျ သူရဲ့ SPass ကို cancel လုပျပွီး white card နဲ့နေ,နေ ဆဲကာဖွဈနတေယျ။ ပွီးတော့သူက ပွနျဝငျလာဖို့ Visa ကိုလညျး မလြှောကျထားမိခဲ့ဘူး။ ဆိုတော့ လူဝငျမှုကွီးကွပျရေးက တဈခါတညျး သူ့ white card ကိုသိမျးသှားပါလရေော။ အဲဒီတော့မှ ဟငျ့အငျး ငါမလိုကျတော့ဘူး ပွနျဝငျမယျတဲ့။ အရာရှိက မရပါဘူးလို့ ဇှတျငွငျးတော့တာပါပဲ။ လဆေိပျက လူဝငျမှု ဌာနမှာ စုံစမျးပမေယျ့ အကွောငျးမထူးပါဘူး။ မလေးကနေ visa လြှောကျပွီး ပွနျဝငျလာခဲ့ပါတဲ့။ နောကျဆုံးမတော့ သူလညျး စိတျမပါလကျမပါနဲ့ boarding ဆီကို သှားရတော့တာပါပဲ။
ဒုတိယတဈခုကတော့ ရဗေူး။ အထဲမှာ ရဆောရငျသောကျဖို့ ရဗေူးနှဈဗူးကို စြေးကွီးကွီးပေးဝယျမိခဲ့တယျ။ boarding ဝငျတော့မယျဆိုတော့ ရဗေူးထဲက ရကေို သှနျပါတဲ့။ စြေးကွီးကွီးရယျ ရဗေူးရယျ တဈလှညျ့ဆီကွညျ့ပွီး နှမွောနမေိတော့တာပါပဲ။ ပါလာတဲ့ တဈယောကျက အမြှျောအမွငျကွီးစှာ ငါအကုနျသောကျမယျဆိုပွီး သောကျရှာတယျ။ အထဲကရတေော့ ပွနျဖွညျ့လို့ ရပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဟိုရလေေးတှကေ စြေးအကွီးသား…
Air Asia နဲ့ ပထမဆုံးအကွိမျပေါ့။ နောကျကတဈဖှဲ့ကတော့ စကားတှဖေောငျဖှဲ့လို့။ နာဆီလာမကျစားကောငျးတယျဆိုပွီး အမှာကောငျးပမေယျ့ online ကနေ ကွိုမှာမထားတဲ့အတှကျ မရလိုကျပါတဲ့ဗြား။ ဓါတျပုံရိုကျမယျ့သူတှကေလညျး ကငျမရာတဈပွငျပွငျပေါ့။ တိမျတှကေို ရိုကျမယျ ရှုခငျးရိုကျမယျနဲ့ ကငျမရာကွီးတဈခြိနျခြိနျ။ သိပျမကွာခငျမှာပဲ ကြှနျးစု ငယျလေးတှကေို မွငျရတယျ။ ရပွေငျတှကွေားက ကြှနျးစုလေးတှကေို ရိုကျနမေိသေးတယျ။
လယောဉျဘီးလုံးခပြွီဆိုတော့ ငွိမျ့ခနဲပဲ။ မွနျမွနျထကျထကျဆငျးပွီး လယောဉျကှငျးက ရှုခငျးတှကေို ရိုကျဖို့ အဆငျသငျ့ပွငျ။ လယောဉျထိပျဖူးကိုငျရိုကျခငျြတဲ့သူ ရှိသေးတယျဗြ။ ဟဲဟိုးလဆေိပျလေးလိုပါပဲ။ သိပျမကွီးလှနျးမသေးလှနျးပမေယျ့ သသေပျလှပတဲ့ လဆေိပျငယျတဈခုပါ။ အဲယားကှနျးမရှိတာတဈခုပဲ။
တတိယအခကျအခဲကတော့ ခရီးသှားသူ ခွောကျယောကျထဲမှာ တဈယောကျတညျး မလေး လူဝငျမှုမှာ ကနျြနခေဲ့တာပါပဲ။ သူတို့ computer system down သှားတာမို့ ခဏစောငျ့ပါဆိုတော့ သူတဈယောကျတညျး အဲ့ဒီဖကျအခွမျးမှာ။ လယောဉျတဈစငျးလုံးက ခရီးသညျတှေ ဒီဖကျရောကျကုနျပွီလေ။ အသှားတငျပဲလားဆိုတော့ မဟုတျဘူးခငျဗြ အပွနျမှာလညျး သူ့အလှညျ့မှာ system down ပွနျရော။ ဘာဆုမြားတောငျးခဲ့လဲ မသိနျော။
လဆေိပျငယျလေးထဲမှာ ဟိုလြှောကျကွညျ့ဒီလြှောကျကွညျ့။ ပွီးတော့ ပွနျဝငျမယျ့သူအတှကျ KLလယောဉျလကျမှတျတဈခါတညျးဝယျ။ မြားတယျလုပျနသေေးတယျနျော ရှေးစရာလမျးမှ မရှိတော့ပဲ။ အိုကပွေီ ဆိုတော့ ကားစငှားရပွီ။ ၁၈ကပျြပဲ ပေးရတယျထငျတယျ။ သိပျမှမဝေးပဲ။
ဟိုတယျအခနျးတှကေ အဆငျပွပေါတယျ။ ဘနျကောကျက ဟိုတယျတှလေောကျ မကြဥျးဘူး။ ခဏနားပွီးရငျ ခရီးပွနျစဖို့ ကနြျောက ခရီးသှားကောငျတာမှာ တောငျမေးမွောကျမေးလုပျရငျး စြေးတှဆေဈနခေဲ့တာ။ တျောလောကျပွီထငျနတော တကယျက မြားသေးသတဲ့။ အကွိုအပို့ကားခနဲ့ဆိုရငျတော့ သိပျမကှာပါဘူး။
ရမေိုးခြိုး အဝတျစားလဲ ပွီးနလေ့ညျစာ စားဖို့ အခြိနျက သိပျမကနျြတော့။ ကားက သိပျမကွာခငျလာကွိုတော့မှာ။ ရှေးခယျြခြိနျသိပျမရတာမို့ ဟိုတယျက စားသောကျဆိုငျမှာပဲ ထမငျးကွျောခညျြး မှာပဈလိုကျတယျ။ ထမငျးတှကေ ထှေးနတောမို့ သူတို့ထမငျးကွျောက တဈမြိုးပဲ။ ပိုကျဆံရှငျးတော့ အတျောလေးကသြှားတာ အငျးဟိုတယျမို့ နမှောပါလေ။ တကယျက ပိုကျဆံမှားတောငျးတာဆိုပွီး နောကျတဈနမှေ့ာ ပိုကျဆံတှလောအမျးသှားပါတယျ။ accountant တဈယောကျမှ မပါတာ အဲ့ဒီမှာ နာတာပဲ။
ပထမဆုံးက ကိုယျဝနျဆောငျမိနျးမပုံဖွဈနတေဲ့ ကြှနျးဆီကိုပါ။ လာကွိုတဲ့ကားက ကနြျောတို့ဆီက ကားလိုပဲ တကယျ့ကကွီးရခြော ၀စ်စနှဈလုံးပေါကျကား။ အနှီကားရယျ တောလမျးလိုလို အိမျကလေးတှရေယျက ရှပွေညျကွီး လှမျးအောငျဖနျတာပေါ့။ ကွယျငါးပှငျ့ ခမျးနားလှတဲ့ ဟိုတယျကွီးရှမှေ့ာ အဖွူ အာမို နှဈယောကျကို သှားကွိုတော့ ဒီဟိုတယျ တညျးခငျြလိုကျတာ ဖွဈကွပွနျရော။ အပွနျမှ ဓါတျပုံရိုကျမယျတေးထားခဲ့ပမေယျ့ မရိုကျဖွဈခဲ့ပွနျဘူး။
စကျလှဆေိပျကိုရောကျတော့ ကောငျးကငျပွငျရယျ ပငျလယျရယျ ရှုခငျးတှကေ တမတေ့မော။ အဲ့ဒီအခြိနျမှာ အလုပျအကွောငျးတှေ ခေါငျးထဲမှာ မရှိ ဘယျပူပငျသောကမှ မရှိတော့တာမို့ ခရီးထှကျရခွငျး အကြိုးပပေဲလို့ ကိုယျ့ဖာသာ မှတျခကျြခမြိတယျ။ ဒါမှလညျးနောကျထပျ ခရီးတှသှေားဖွဈနမှောလေ။
ရပွောပွာ လှိုငျးဖှေးဖှေးကို လကျကထိရငျး အငျးထဲမှာ စကျလှစေီးရတာရယျ မကှေး-မငျးလှ စကျလှခေရီးရယျကို ပွနျတှေးမိသှားပွနျရော။ နရောခငျြးမတူပငျမယျ့ အိမျပွနျခရီးလိုခံစားမိသှားလို့ပါလေ။
ရှုမဆုံးတဲ့ ပငျလယျပွငျအလှကိုတျောတျောလေး ကြျောလာပွီး စ စခငျြးမွငျရတာက တံတားရှညျတဈစငျးပါပဲ။ ပငျလယျထဲကိုထိုးထှကျနတေဲ့ တံတားရှညျအဆုံးမှာ ခရီးစဉျတဈခုပေါ့။ တောငျပျေါကို တကျရငျး ရခြေိုကနျတှငျးတဈခုကို သှားရတယျ။ နိုငျငံခွားသားတဈခြို့က တဘကျတဈထညျရကေူး ဝတျစုံနဲ့ဆိုတော့ ဘာမြားပါလိမျ့ပေ့ါ။ ရခြေိုကနျမှာ ရဆေငျးကူးကွမယျထငျပါတယျ။ သဘာဝကနျကို chemical တှနေဲ့ ညဈနှမျးပကျြစီးမှာ စိုးတာကွောငျ့ ရခြေိုးဖို့အသုံးအဆောငျ ဆပျပွာ ခေါငျးလြှျောရညျတှေ သုံးစှဲခှငျ့ မပွုပါဖူးတဲ့။ အငျးလေးကနျကိုကော ထိနျးသိမျးဖို့ အငျး……………
ကနျအတှငျးမှာ အပြျောစီးဖို့ ခွယေကျ လှကေလေးတှေ ကနျတျောမငျပနျးခွံထဲမှာ ကနြျော ဂြီကလြို့ ဖနေဲ့မေ ခွညေောငျးအောငျ ယကျခဲ့ရတဲ့ လှမြေိုးလေးတှပေါပဲ။ ဓါတျပုံတှေ အားရအောငျရိုကျပွီးတော့ တံတားဖကျကိုပဲ မွနျမွနျလြှောကျဖွဈခဲ့တယျ။ ဘာမှလညျး လောကျလောကျလားလား မရှိဘူးလေ။
လူပွိုကွီးလုပျလာတဲ့ တဈယောကျကလညျး ဟိုနား တဈပုံလောကျ ဒီနားတဈပုံလောကျဆိုလို့ ရိုကျခဲ့ပေးရပါသေးတယျ။ ရှုခငျးပုံတှကေ သဘာဝအလြောကျ လှနလေကျြသားနဲ့ သူပါမှပဲ ပကျြတော့တယျ။ ဇနီးနဲ့သားလေးအတှကျလို့တော့ ပွောတာပါပဲ။ ခငျြ့ယုံကွတာပေါ့ဗြာ။
နောကျတော့ လနျကာဝီရဲ့ အဓိကဇာတျဆောငျတှရှေိတဲ့ဆီပေါ့။ ကငျမရာ မှနျဘီလူးရှညျကိုလဲလိုကျ မှနျဘီလူးတိုကိုလဲလိုကျ။ မွနျလိုကျတဲ့ ငါ့ကောငျတှရေ။ ဖတျြခနဲထိုးဆငျးလိုကျ သခြောခြိနျပွီး ရိုကျလိုကျတော့ လဟောနယျ။ ကဲ..ဓါတျပုံဆရာတျောပါတယျဆို ငါ့ကောငျတှရေယျ ဖွညျးဖွညျးသကျသာ ပွနျပါတော့လို့ ညညျးယူရတယျ။ အလငျးအမှောငျ ခြိနျဖို့ကို သတိမရတာမို့ နှိပျလာသမြှ ပုံတှကေလညျး မှောငျနဲ့မညျးမညျး လရောငျလညျးမသဲကှဲဆိုသလို။ ပညာရပျဆိုတာ သငျလို့ကို မဆုံးနိုငျဘူးနျော။
နောကျတော့ ကြှနျးငယျလေးတဈခုကို လိုကျပို့ခဲ့တယျ။ ပငျလယျမှာ ရပွေငျကွညျစိမျးနတောနဲ့ ပွာလဲ့နတေဲ့ အရပျတှရှေိတယျ။ အခုနရောက ပွာလဲ့နတောပေါ့။ ရကွေိုကျတဲ့ ကိုယျလိုလူက ရထေဲဆငျးခငျြလိုကျတာ။ အဖွူစုံတှဲက ပါလာတဲ့ အပျေါကအဝတျတှကေို အဆငျသငျ့ခြှတျ အောကျက ရကေူးဝတျစုံကိုယျစီနဲ့ ရထေဲဆငျးခြိနျမှာ ကလြိကလြိဖွဈနခေဲ့ပွီ။ well prepare လုပျဖို့ လိုသှားခဲ့တာပါပဲ။ မဟုတျရငျ ရထေဲမှာ ပြျောရမှာ။
အိမျပွနျခြိနျကြ နလေုံးက ညိုနပွေီ။ ခဏလေးပါလားနျော။ အငျး ပိုကျဆံမြား ရှာရတာ ခကျသလောကျ အခုလို သုံးလိုကျတော့ အသံတောငျမကွားလိုကျရ။ ကမနျးကတနျး ရခြေိုး ညစာစားဖို့ အပွငျဖကျကို အစာထှကျရှာဖို့ပါ။ အနီးအနားမှာ မုနျ့စြေးတနျးဆိုတော့ အပွေးအလှားအပေါ့။ တှကျရေးက စကျသူဌေး တှကျကွညျ့တော့ စကျမရှိ အစားအစာတှကေ ကိုယျတှအေကွိုကျမဟုတျတာမို့ နယျမွသေဈရှာဖှဖေို့ ခွလှေမျးစ။ ကိုလံဘတျလိုဘာလိုလိုပါ။ ၁၈ ကပျြပေးခဲ့ရတဲ့ ခရီးကိုလမျးပွနျလြှောကျတယျ လဆေိပျရောကျမှ တက်ကစီကိုငှားပွီး လမျးတဝကျက အဖျောတှကေို ချေါတငျခဲ့တာပေါ့။
ပငျလယျစာ ပငျလယျစာ ပငျလယျမွငျကတညျးက တကွျောကွျောကြှေးကွျောလာခဲ့တာ။ အကောငျးဆုံးစားသောကျဆိုငျ ရောကျတော့ အမြိုးတှနေဲ့တှပွေ့နျရော။ အဈကိုတို့ဘာသုံးဆောငျမလဲဆိုကတညျးက အဖှဲ့ကြ သှားတော့တာပါပဲ။ ဟိုဟငျးလေးမွညျးကွညျ့ ဒီဟငျးလေးမွညျးကွညျ့ နဲ့ ညှနျးတော့တာကိုး။ အဲ့ဒီမှာပဲ ကနြျောတို့ ဇာတျလိုကျကြျော ဦးကြျောနဲ့စတငျဆုံဆညျးခဲ့ကွတယျ။ ကနြျောတို့အတှကျ တကယျ့ လမျးပွတဈယောကျ အဈကိုတဈယောကျပါပဲ။ နောကျနကေ့စလို့ ပွနျတဲ့ မနကျအထိ ဦးကြျောရဲ့ အကူအညီတှေ အမြားသားပါ။
ဒုတိယနမှေ့ာတော့ ဟိုသှားမယျ ဒီသှားမယျကနခွေခေငျးလကျခငျးသာတုနျး ဟိုးအဝေးက တောငျပျေါမှာ cable car စီးကွမယျဖွဈသှားတယျ။ မိုးတှတေဈအားရှာတတျတယျ။ မိုးတှရှောရငျ cable car မစီးရတော့ဘူးဆိုတော့။ ဒီရောကျမှတော့ စီးဖွဈအောငျစီးမယျပေါ့။ ဒီမှာ စီးမယျဆိုပမေယျ့ စြေးက အကွီးသားလေ။
သှားတဲ့လမျးခရီးမှာ ရှကျလှဆေိပျလှလှလေးရှိတယျ ဆိုတော့ ကငျမရာသမားနှဈယောကျက မကျြစိလေးတှေ အရောငျတောကျသှားတယျ။ ဒါပမေယျ့ တကယျတမျး ရောကျတော့ နကေတဈအားပူနခေဲ့တာ။ ရှကျလှဆေိပျကတော့ လှပါတယျ။ တောငျပျေါတကျတဲ့လမျးကလေးက မမွေို့လမျးကလေးလိုလို တောငျကွီးလမျးကလေးလိုလို။
Cable car နရောကိုရောကျတော့ မထငျလောကျအောငျ ငွိမျသကျတိတျဆိတျလို့။ အဝငျက ဆိုငျလေးတှမှောလညျး မလှုပျတလှုပျ။ အကောငျလေးတှေ မှေးထားတဲ့ ဥယြာဉျငယျလေးကိုလညျး ဖွတျခဲ့တယျ။ လကျမှတျဖွတျတဲ့နရော ရောကျတော့လညျး ပုံမှနျလိုပဲ။ တိုးတိုးကွိတျကွိတျမရှိလှ။
မဉျြးအဝါရောငျလေးတှေ မွငျတော့ please stand behind the yellow line ဆိုတဲ့အသံမကွားရပါလားလို့တောငျ တှေးနမေိသေးတယျ။ တကယျက MRT မှာမှ မဟုတျပဲကိုး။ တဈစငျးပွီးတဈစငျး သူ့အလိုအလြှောကျ တံခါးလေးတှပှေငျ့လာခဲ့တာ။ အရမျးခဈြခငျကွတဲ့ ကနြျောတို့ ခွောကျယောကျလုံး စညျးလုံညီညှတျစှာ တဈစငျးထဲမှာတကျခဲ့ကွတယျ။ လဟောနယျတဈခုကို ရောကျပွီဆိုတော့မှ သတ်တိကောငျးသူကွီးနှဈယောကျကို တှရေ့တော့တယျ။ တဈယောကျလကျကိုတဈယောကျကိုငျလို့ အားပေးနကွေတာ။ ဒါတောငျ သိပျမမွငျ့သေးဘူး။ တဈယောကျတဈစငျးစီမြား စီးခဲ့ရငျ အပျေါမရောကျခငျ သူတို့အသကျမှီပါ့မလား မသိနိုငျလောကျပါ။ မွငျကှငျးတှေ သိပျလှတယျ လကျမလှတျစနေဲ့ ကွညျ့ဆိုလညျး ဟငျ့အငျး မကျြစိကိုအတငျးမှိတျခေါငျးကို အတှငျခါ။
ပထမအဆငျ့ရောကျသှားတော့ အေးမွတဲ့လထေု နှငျးနုတှကေို ကွုံရပွီ။ မွူမှုနျတှဖှေေးခနဲ ဖှေးခနဲ ကွဲကွဲခနြတေော့တာ။ cable car ပျေါကဆငျးတော့ အပျေါမှာ ကွောကျခဲ့တာ သူတို့နှဈယောကျမဟုတျသလို ဟိုနား ဓါတျပုံရိုကျလိုကျ ဒီနားဓါတျပုံရိုကျလိုကျ။ နောကျတဈဆငျ့တကျမယျဆိုတော့ သူတို့ဇာတျလမျးပွနျစပေါ့။ အပငျြးတော့ပွသေား။
အမွငျ့ဆုံးတောငျပျေါမှာတော့ မွူတှကေ အုပျဆိုငျးမှုံမှိုငျးနပွေီ။ sky bridge ကိုသှားမယျဆိုတော့ ထုံးစံအတိုငျး သတ်တိခဲတှကေ နောကျခွလှေမျးနပွေီ။ လာပါကှာ အရမျးလှတယျ။ မလြှောကျတော့လညျး အစမှာနခေဲ့ဆိုမှ ပါလာခဲ့တာ။ တကယျတမျးလြှောကျပါဆိုတော့ ဘောငျကိုငျပွီးလြှောကျတာတောငျ ရှခွေ့မေလှမျးရဲ။ ဒါနဲ့ အမြိုးသမီးအာဇာနညျနှဈဦးက ကူပွီး မကျြကနျးနှဈယောကျချေါသလို မကျြစိမှိတျပွီး တံတားကို ကူးခိုငျးရတာ။ အဲ့လောကျထိ။ ဗိသုကာပညာရပျတှနေဲ့ လှပတဲ့ကွိုးတံတားတဈခုပါပဲ။ အမွငျ့နဲ့ပနာရလောကျအောငျ ဆောကျထားတဲ့ ဗိသုကာပညာကတော့ အံမခနျးပါ။
Cable car နောကျပွနျဆငျးခြိနျမှာတော့ ဉာဏျကွီးရှငျက အောကျကိုဆငျးတဲ့ဖကျမှာ နရောဦးခဲ့ပွီးနပွေီ။ ဒါတောငျ အလယျကိုလုနကွေသေးတယျ။ တောငျအောကျရောကျတော့ ဗိုကျအတျောဆာနခေဲ့ပွီ။ အနီးအနားမှာဆိုငျရှိတယျဆိုပမေယျ့ တျောတျောလေး ဝေးဝေးကို ပွနျဆငျးခဲ့ရတယျ။ ငါတို့ဆိုတဲ့ စားသောကျဆိုငျလေးပါ။ ပွညျကွီးငါးကွျောကို တျောတျောလေး အရသာတှမေိ့တယျ။
နောကျတော့ ရတေံခှနျဆီပေါ့။ ဒီတဈခါတော့ well plan မို့ ရတေံခှနျမှာ ရခြေိုးခဲ့ရတယျ။ အေးစကျကွညျလငျတဲ့ ရကွေောငျ့ တောငျပျေါတကျခဲ့သမြှ အမောတှေ ပွရေောဆိုပါတော့။ ရတေံခှနျ ကနေ ပွနျတော့ လူကပငျပနျးစပွုလာပွီ။ ဒါပမေယျ့ သဲသောငျပွငျအမညျးတှရှေိတဲ့ဆီကို သှားဖွဈခဲ့သေးတယျ။ ကြိနျစာသငျ့တယျလို့ အဆိုရှိတဲ့နယျမွပေေါ့။ ထူးဆနျးစှာ အဲ့ဒီကမျးခွလေေးတဈဝိုကျမှာပဲ သဲတှမေညျးနခေဲ့တာ။ သစ်စာဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သကျသပွေဖို့ ဖွဈမယျလို့ တှကျဆမိတယျ။
ပွီးတော့ နောကျ အစီအစဉျအတှကျလကျမှတျဝယျရငျး နောကျထပျကမျးခွတေဈခု။ အဲ့ဒီကမျးခွမှော ညနေ လေးနာရီကြျောရငျလူသှားလမျးလို သဲလမျးလေးတဈခု ပျေါလာတတျပွီး ပငျလယျထဲတျောတျောလေးနကျသညျ အထိ ကိုသှားလို့ရခဲ့တယျ။ အငျးတျောကွီး အိုငျမှာ ပျေါတဲ့လမျးလိုမြိုးဖွဈမယျလို့ ထငျမိတယျ။ ကနျြတဲ့အခြိနျမှာတော့ ပငျလယျပွငျကွီးသကျသကျပဲ။
နောကျဆုံးမှာတော့ Eagle Square ကိုသှားကွမယျဆိုပွီး ညနစေောငျးကို အခြိနျဖွုနျးခဲ့သေးတာ။ ညနစောကိုတော့ နောကျထပျအမြိုးတှရှေိတဲ့ ကိုရီးယား ဆိုငျမှာပါ။ အညာဆေးရိုး အနျးဂြော့တို့နောကျပိုငျးမှာတော့ အမကဘယျကလဲ ဟာ အဈကိုကွီးကလညျး ဗမာပဲလား ဖွဈကုနျရော။ အကွိုကျဆုံးကတော့ အာလူးကွျောလေးတှပေါပဲ။ ဆငျးရဲတဲ့မလေးမိသားစုတှလောစားဖွဈရငျ အလကားမတျတငျး ပေးတတျတဲ့ ဟငျးရံလေးတှနေဲ့ မှီးစားကွတယျတဲ့။ ကနြျောတို့လညျး သုံးပှဲလောကျ အပိုခပြေးပါတောငျး ထားရတယျ။ ပငျလယျစာတှနေဲ့စာရငျ စြေးအတနျ ကွီးနတောကိုး။
တတိယနကေို့တော့ မယျလမုလေးမြား ရလမေလား ရှာကွညျ့ဖွဈခဲ့တယျ။ မတှပေ့ါဘူးလေ။ တကယျက သူလာနလေညျး အနားက လူဆိုးတှနေဲ့ဆိုတော့ ဘယျလာရဲမလဲ။ မယျလမုတနျးအလှမျးပွဆေိုပွီး စာတဈပုဒျဖွဈနိုငျလောကျရဲ့။ နိုငျငံတကာက ကိုယျပိုငျရှကျလှတှေေ သင်ျဘောတှလောရပျတဲ့ နရောကိုလညျး ရောကျဖွဈသေးတယျ။ လငျးနို့ဂူကိုတော့ အနံ့နဲ့တငျ အဝေးက နမေိတယျ။ အထဲမှာ ဘာရှိရှိ မကွညျ့ခငျြတော့။
နောကျတော့ ပငျလယျဝ ဆီကို ထှကျလာဖွဈတယျ။ ပငျလယျကမျးခွေ တဈခုမှာ ရခြေိုးခှငျ့ပွုမယျလို့ မနကေ့ သဘောတူညီခကျြယူခဲ့တာကိုး။ ပုံပွငျဆနျတဲ့ ဂူလေးတဈခုကိုလညျး ရောကျခဲ့သေးတယျ။ ထိုငျးမငျးသမီးတဈပါး ထှကျပွေးပုနျးအောငျးတဲ့ နရောတဈခုပေါ့။ တကယျတမျး ရခြေိုးမယျ့ ကမျးခွကေိုပွတော့ တကယျ့ ကမျးခွသေကျသကျ ရအေနကျကိုမေးတော့ ကိုယျ့တဈရပျ မကတော့။ ပွီးတော့ အဝတျအစားလဲဖို့ ရခြေိုခြိုးဖို့ နရောမရှိဆိုတော့ ကဲ ပွနျပါတော့လို့။ ထမငျးလညျး ဆာပွီလေ။
နောကျတော့ ပငျလယျ လှိုငျးတှကွေားထဲ အလူးလူးအလိမျ့လိမျ့။ ဂြူးရဲ့ဇာတျကောငျကိုတောငျ သတိရမိသေးတယျ။ အခုနေ ဘယျသူမှ လာမမေးလို့သာပေါ့။ ဘုရားတရားတရငျး လှိုငျးလူးနတေဲ့ စကျလှဘေောငျကို အတငျးကိုငျရတော့တာပါပဲ။ ကွောကျတတျတဲ့သူတှလေား မမေးပါနဲ့တော့ဗြာ..
နလေ့ညျစာကိုတော့ ရပေျေါစားသောကျဆိုငျလေးမှာပါပဲ။ ပငျလယျထဲနီးလို့ထငျရဲ့ စြေးအတျောခြိုတယျ။ ငါးတှကေိုလညျး ပွနတောတှမေိ့သေးတယျ။ ဒါပမေယျ့ မိုးလညျး နညျးနညျးရှာနတောမို့ ဆိုငျထဲမှာပဲ ပွနျထိုငျရငျး ရောကျလာမယျ့ နလေ့ညျစာကို မြှျောနခေဲ့မိတယျ။
အပွနျမှာတော့ နာမညျကြျော မငျးသမီးရဲ့ ပွတိုကျကို သှားကွညျ့ဖွဈခဲ့တယျ။ မငျးသမီးရဲ့ ကြိနျစာသငျ့ နယျမွတေဈခုဖွဈနခေဲ့တဲ့ ဒီအရပျက အခုမှ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာတာ ကြိနျစာသငျ့ကာလ ကြျောလှနျလာတဲ့နောကျလို့ ယုံကွညျနခေဲ့ကွတယျ။ မသှားဖွဈခဲ့တဲ့ နရောတဈခုကတော့ မီးလောငျတဲ့ ဆနျတှရှေိတဲ့အရပျပါပဲ။
အိမျမပွနျခငျ ညနစောကိုတော့ အမြိုးတှရေဲ့ ပငျလယျစာဆိုငျမှာပါပဲ။ နောကျနပွေ့နျတော့မှာမို့ နှုတျဆကျညစာ ဖွဈခဲ့တယျဆိုပါတော့။ ဦးကြျောနဲ့လညျး ထမငျးလကျဆုံစားဖွဈခဲ့တယျ။
နောကျနေ့ မနကျမှာတော့ နာမညျကြျော လနျကာဝီကို ကြောခိုငျးဖို့ ပွငျကွရပွီ။ လယောဉျဆိပျမှာ ပစ်စညျးတှကေို စဈဆေးပွီးကွောငျးတံဆိပျကပျတဲ့ အစောငျ့အလုပျကို အပူအပငျကငျးလိုကျတာ အဲ့လိုအလုပျမြိုးလုပျခငျြတယျ ညညျးခဲ့ကွသေးတယျ။ အလုပျကို ပွနျဝငျရတော့မယျဆိုတော့ အဲ့လို စိတျတှေ ဂယောကျဂယကျ ဖွဈခငျြလာကွပွီ။
ဒါပမေယျ့ အဲ့ဒီရကျပိုငျးကာလမှာတော့ ပြျောရှငျခဲ့ရတယျ။ ဘဝအသဈတဈခုလို အဲ့ဒီရကျပိုငျးလေး က ဖွဈတညျစခေဲ့တယျ။ ဒါကွောငျ့လညျး ခရီးတှထှေကျရငျး အပနျးဖွဖေို့ အမွဲကွိုးစားနဖွေဈခဲ့တာ။
ပွနျလာတဲ့လယောဉျနဲ့အတူ လနျကာဝီခရီးစဉျက ပွီးဆုံးခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဓါတျပုံတှေ ပွနျကွညျ့ဖွဈတိုငျး ဒီနရောလေးမှာ ဘယျလိုပြျောခဲ့ကွတာဆိုတဲ့ စိတျကတော့ ကုနျခဲ့ရတဲ့ အခြိနျကာလ ငှတှေအေတှကျ နှမွောတသ မဖွဈစခေဲ့တာ သိပျသခြောနခေဲ့တယျ။
အခကျအခဲတှလေညျး ကွုံခဲ့တယျဆိုပမေယျ့ နောကျနှဈမှာလညျး ခရီးတဈခုခုတော့ သှားဖွဈဦးမှာပါ………..
Posted by Anonymous at 1:41 AM 21 comments Links to this post
Posted by Anonymous at 6:35 PM 26 comments Links to this post
Posted by Anonymous at 2:13 PM 31 comments Links to this post
Posted by Anonymous at 2:26 PM 16 comments Links to this post
Posted by Anonymous at 8:40 PM 26 comments Links to this post
Posted by Anonymous at 1:30 PM 36 comments Links to this post
Posted by Anonymous at 2:08 PM 31 comments Links to this post
Posted by Anonymous at 1:12 PM 12 comments Links to this post
ကော်ဖီခွက် ပုရွက်ဆိတ်၊ ရဲတိုက် နှင့် ဆေးမင်ရည် စုပ...